नापीको नक्सामैं लिम्पियाधुरा गायब, राजाको आग्रहमा नराखिएको श्रेष्ठको दावी - Everest Dainik - News from Nepal
नापीको नक्सामैं लिम्पियाधुरा गायब, राजाको आग्रहमा नराखिएको श्रेष्ठको दावी
काठमाडौं, निकै विवादित बनेको कालापानी र लिम्पियाधुराका बारेमा केही नयाँ तथ्य सार्वजनिक भएका छन् । चीन, भारत र नेपालको बीचमा पर्ने यो क्षेत्रमा भारतीय सेनाको उपस्थिति कायमै छ । पछिल्ला दिनहरुमा भने कालापानी राजनीतिक मुद्दा बनेको छैन । कुनै दिन कालापानीको मुद्दाले वामपन्थीहरु विभाजित हुने अवस्था समेत बनेको थियो ।
कालापानीमा रहेका भारतीय सेना हटाउ भन्नेहरु कैयनपटक सरकारमा सहभागी बनेपनि कालापानी र लिम्पियाधुराका बारेमा खासै चासो देखाएनन् ।
यसैबीच अन्नपूण पोष्टले उक्त विवादित क्षेत्रका बारेमा सीमाविद बुद्धिनारायण श्रेष्ठसँगको कुराकानीमा आधारित रहेर समाचार प्रकाशन गरेको छ ।
यस्तो छ समाचारको पूर्र्ण पाठ
याे पनि पढ्नुस अन्तर्राष्ट्रियकरण भयो लिम्पियाधुरा र कालापानीको मुद्दा
याे पनि पढ्नुस के हो लिपुलेक र कालापानीको विवाद ? (ऐतिहासिक तथ्य र नक्सासहित)
दरबारको आग्रहमा छोडियो- बुद्धिनारायण श्रेष्ठ, पूर्वमहानिर्देशक, नापी विभाग
लिम्पियाधुराबारे दरबार र सेनासँग किन राय लिनुपर्ने अवस्था आयो ?
तपाईलाई यसबारे कसरी थाहा भयो र?
यसबारे तपाईंले आवाज उठाउनुभएन ?
२०३० सालमा गृह मन्त्रालयका अधिकारी पुरुषोत्तम रेग्मी संयोजकत्वको समितिले गरेको स्थलगत प्रतिवेदनमा लिम्पियाधुरा नेपालको सीमा भएको उल्लेख छ । त्यस्तै २०३८ सालको दार्चुलाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी द्वारीकानाथ ढुङ्गेल र २०४५ सालमा प्रजिअ डिल्लीराज जोशीको प्रतिवेदनमा पनि लिम्पियाधुरा नेपालमै रहेको प्रतिवेदन पेस गरिएको थियो ।
ट्याग्स: kalapani, limpiyadhura